काठमाडौं उपत्यकाका बढ्दो संक्रमण : कस्तो होला अबको निषेधाज्ञा ? – Sandesh Press
काठमाडौं उपत्यकाका बढ्दो संक्रमण : कस्तो होला अबको निषेधाज्ञा ?
August 23, 2021 140
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय भिडभाड धेरै हुँदा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको पाइएको छ । बढ्दो संक्रमणदरको समीक्षा गरी निषेधाज्ञा लम्ब्याइने प्रशासनले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले अझै निषेधाज्ञा लम्बिने बताए । “पछिल्लो समय थप गरिएको निषेधाज्ञा सकिन अझै दुई दिन बाँकी छ । विभिन्न कारणले संक्रमण र मृत्युदर बढिरहेको छ । यसको समीक्षा भोलि ७ गते सोमबार हुनेछ,” प्रजिअ निरौलाले भने, “लम्बिने निषेधाज्ञामा कुन–कुन प्रावधान फेरबदल गर्ने वा पहिलेकै निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने भन्नेबारे निर्णय गरिनेछ । अनावश्यक भिडभाड नियन्त्रण, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए÷नभएको अनुगमन भइरहेको छ । कतिपय बेलामा हामीले सर्वसाधारणलाई छुट दिएका छौँ । हाम्रो प्राथमिकता भनेको सर्वसाधारणलाई सहजीकरण गर्ने नै हो । यसर्थ, पहिलाको जस्तै भयावह स्थिति आउन नदिन प्रशासन कटिबद्ध छ ।”
उनका अनुसार निषेधाज्ञा थप्ने र आदेश परिवर्तन गर्नेबारे छलफल भएको छैन । “यसबारे सरोकारवाला निकायहरूसँग भोलि नै छलफल हुनेछ । निषेधाज्ञा जारी राख्ने र हटाउने अधिकार प्रशासनलाई भए पनि यसबारे सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन,” उनले भने ।
भिडभाड नियन्त्रण गर्न आकस्मिक र प्रभावकारी अनुगमन भइरहेको प्रशासनको दाबी छ । अनुगमनको क्रममा आदेशको पालना नभएको पाइएमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ । यदि, संक्रमणदर बढ्न गएमा प्रशासनद्वारा जारी गरिएको आदेश फेरबदल गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकानुसार हाल काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै कोरोनाका ११ हजार ४३६ जना सक्रिय संक्रमित छन् ।
पछिल्लोपटक थप गरिएको निषेधाज्ञामा राति ८ बजेपछि अत्यावश्यकबाहेकका सबै सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । उक्त निषेधाज्ञा आउँदो मंगलबार राति १२ बजे सकिँदै छ ।
Prevटिकटकमा भाईरल ‘सारीवालि’: भिडियो बनाउनका लागि किनिन् १५० सारी !
Nextराष्ट्रिय आमा: प्रचण्ड पत्नि सीता दाहालको स्वास्थ्य समस्या के हो ? जान्नुहोस